Distance Learning - Soomaali / Imaanshaha
Imaanshaha waxaa lagu duubi doonaa is dhexgalka waalidka maalinlaha ah ee Seesaw. U hagaaji wixii walaac ah ee ku saabsan imaatinka Julie Midas, Agaasimaha Caruurnimada Hore. Ardayda waxaa laga fili doonaa inay ku lug lahaadaan nashaadaadka fasalka ee loo xilsaaray waqti kasta maalinta / fiidka oo u shaqeeya qoyskooda. Ardayda ku lug leh nashaadaadka fasalka laga filayo ee loo maro Seesaw waxay heli doonaan credit loogu talagalay imaatinka. Qoysasku waa inay soo wacaan 320-370-8251 markasta oo ilmahoodu aanu awoodin inuu kaqaybqaato barashada masaafada ah maalin kasta oo jirta awgeed xanuun ama hadii kale.
Imaanshaha waxaa lagu duubi doonaa is dhexgalka ardayda maalinlaha ah ee Seesaw. U jihayso wixii walwal ah ee ku saabsan imaanshaha maamulka. Ardayda waxaa laga fili doonaa inay ku lug lahaadaan nashaadaadka waxbarida fasalada waqti kasta inta lagu jiro maalinta / fiidka oo u shaqeeya qoyskooda. Ardayda ku lug leh nashaadaadka fasalka laga filayo ee loo maro Seesaw waxay heli doonaan credit/points loogu talagalay imaatinka. Wicitaanada taleefanka ayaa u bixi doona ardayda aan la macaamilin macallimiinta
Ardaydu waa inay galaan Schoology maalin kasta inta u dhaxaysa 10:00 am - 11:59 pm (saqda dhexe) si loogu tiriyo "xaadir" maalinta dugsigaas.Haddii ilmahaagu buko oo aanu geli karin Schoology, fadlan ku soo qor maqnaanshaha khadka imaanshaha dugsiga ama ka maqnaanshaha khadka tooska ah ee ku yaal bogga hore ee Skyward Family. taleefan wicitaan ayaa aadi doona qoysaska ardaydoodu aysan la macaamilin macallimiinta.